Fanitsiana ny fitsapana EMC tsy nahomby
SERVIS TESTING EMC
Ny dingana manontolo amin'ny EMC sy ny fanohanana ara-teknika ho an'ny famolavolana mialoha ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny vokatra, ary manome endrika fanondro feno sy antontan-taratasy ara-teknika. Manome fanohanana ara-teknika eo an-toerana sy fanamboarana vokatra manokana mba hanampiana ny mpanjifa hanatsara, vahaolana ara-tsiansa sy ara-dalàna.
Izy io dia afaka manandrana ny CE, FCC, 3C ary tetikasa fanamarinana hafa.Ary ny laboratoara koa dia manana fitaovana fitiliana elektronika fiara, afaka manandrana karazana fitaovana eo anoloana fiara. Manolotra serivisy fitiliana mifanaraka amin'ny elektromagnetika izahay, azafady mba manaova fotoana mialoha.
Ho an'ny fampitaovana, taratra ary zavatra fitsapana hafa dia mihoatra ny fenitry ny santionany fitsapana mba hametraka soso-kevitra fanatsarana sy fomba lehibe, countermeasures, manampy ny mpanjifa hampihena ny fitsabahan'ny vokatra, mba hahatratrarana ny tanjon'ny fanadinana.
Ho an'ny fitsapana mialoha mialoha ny mpanjifa ary aorian'ny tsy fahombiazan'ny fitsapana.Ny laboratoara dia azo manofa ho an'ny mpanjifa amin'ny fanamarinana marobe, ny santionany dia azo alefa mivantana, na ny mpanjifa mihitsy no tonga amin'ny fitsapana toerana, azafady mba manaova fotoana mialoha.
ESD electrostatic discharge fitaovana fitsapana
Nanao fitaovana fitsapana manohitra ny fitsabahana
Antenna logiciel (30MHz-1GHz)
Receiver fitiliana conduction (9KHz-3GHz)
Spectrometer fitiliana taratra (10Hz-26.5GHz)